पङ्क्ति क्रमाङ्कनको गुणहरू सेट गर्नुहोस्.
यदि गणना अवधि एक भन्दा बढी छ भने तपाईँं पङ्क्ति सङ्ख्याहरू बीच प्रदर्शन गर्नका लागि बिभाजक क्यारेक्टर प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ.
सङ्ख्या नभएको पङ्क्तिहरूमा बिभाजकहरू मात्र प्रदर्शित हुन्छ.
पङ्क्ति गणनामा निश्चित गर्नुहोस् कि खाली अनुच्छेदहरू वा पङ्क्तिहरू पाठ फ्रेमहरूमा समावेश गर्ने भनेर निश्चित गर्नुहोस्.
पाठ फ्रेमहरूमा पङ्क्तिहरू
ले रेखा नम्बरहरू पाठ फ्रेमहरूमा पाठमा थप्दछ। प्रत्येक पाठ फ्रेममा संख्याको पुन: सुरुवात, र डकुमेन्टको मुख्य पाठ क्षेत्रमा रेखा गणनाबाट बहिष्कार गरिएको छ। . लिङ्क गरिएका फ्रेमहरूमा , संख्या पुन: सुरुवात गरिएको छैन।
प्रत्येक नयाँ पृष्ठ फेरि सुरु गर्नुहोस्
पङ्क्ति सङ्ख्याहरू थप गर्दा
Title is: लाइन क्रमाङ्कन